Rosiana Retirety Nonina Tao Anaty Trano Tondra-drano (Rano Mangatsiaka Hatreny Andohalika) Nandritra Ny Dimy Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2016 7:32 GMT
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nihaona tamin'i Tereshchenko ny mpitati-baovao avy ao amin'ny vavahadim-baovao ao an-toerana Ykt.Ru, Maria Alexeeva, nasain'i Tereshchenko nitety ny tranony izay feno rano atsasany nandritra ny dimy taona lasa izy. Nasainy nanao baoty manokana tsy tantera-drano izy talohan'ny nidirana tao anatiny. “Tandremo indrindra ny mianjera,” hoy izy nampitandrina azy. “Somary lalina eny amin'ny faritra sasany, ary mangatsiaka toy ny ranomandry ny rano.”
Raha hijery ny tatitra feno sy ny sary nalain'i Maria Alexeeva, jereo ato ny tranonkalan'ny News.Ykt.Ru.